Video: Hal-abuurka waxaa lagu gaaray xallinta dhibaatooyinka | Martech Zone
Jimcihii, waxaa la i siiyay fursad la yaab leh oo aan kaga qayb galo Shirweynaha Hal-abuurka ee Compendium. Intii uu hoggaaminayey madaxweyne Frank Dale, oo fikrad ka helay Blake Matheny, iyo taageerada aasaasaha Chris Baggott iyo Sales VP Scott Blezcinski, shirkaddu waxay qaadatay "waqti ka baxsan" shaqada iyo, taas bedelkeedna waxay u qoondeysay maalin hal-abuurnimo
Chris wuxuu ku bilaabay hindisaha sheeko la yaab leh oo ku saabsan sida uu ugu guuldareystay hal ganacsi, laakiin markii uu aqoonsaday dhibaatada, wuxuu dhisay shirkad kale oo la yaab leh - Xaqiiqda.
Furaha sheekadiisa ayaa ah in hal-abuurnimadu aysan ku saabsanayn abuuritaanka wax murugsan ama qabow… Waxay ku saabsan tahay garashada dhibaatada iyo dadaal adag oo lagu xallinayo xalka. Maalin gudaheed, 3 koox oo ka tirsan Compendium ayaa aqoonsaday 3 dhibaato oo kala duwan oo macaamiishooda ay la kulmeen:
Abuuritaanka waxyaabaha fudud.
Hagaajinta tayada nuxurka.
Hagaajinta sicirka beddelka barta Baaqyada Waxqabadka.
Kooxuhu waxay la xiriireen macaamiisha muhiimka ah, waxay weydiisteen caawimaaddooda, fikradaha fikirka, iyo xitaa saadaaliyay saameynta guud ee ganacsiga. Lama wadaagi karo xalalka - kaliya in midkasta uu wax weyn u badalayo ganacsigooda. Dhamaan hal maalin!
Shirkaddaadu si firfircoon ma u dhiirrigelisaa hal-abuurnimada sidan oo kale ah? Haddii aad ogaato in ganacsigaaga maalinba maalinta ka dambeysa uu jiidayo wax soo saarka kooxdaada iyo niyadda - tani waxay noqon kartaa kaliya xalka saxda ah ee dib-u-firfircoonida ganacsigaaga, shaqaalahaaga, iyo xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee suuqa. Shaki kuma jiro inaan tan ku biirin doono shirkadeena!
Shaacinta: Anigu waxaan ahay saamilay Compendium, sii wad caawinta macaamiishooda, Blake wuxuu ka shaqeeyay mashaariic aad u xiiso badan oo taxaddar leh DK New Media.
Tags: blahen mathenychris baggottisugeynshirkii hal-abuurnimo